Kooxda Barcelona oo bar-tilmaameed ka dhiganeysa xidig kaloo cusub ee ku sugan Manchester United – Gool FM
Kooxda Barcelona oo bar-tilmaameed ka dhiganeysa xidig kaloo cusub ee ku sugan Manchester United
(Barcelona) 21 Sab 2018. Sida ay shaaca ka qaadeen wargeysyada dalka England kooxda Barcelona ayaa waxay xiiseeneysaa ciyaaryahan cusub ee ka tirsan safka kooxda Manchester United.
Wargeyska “The Sun” ee dalka England ayaa sheegay in Barcelona ay isku dayi doonto inay lasoo saxiixato khadka dhexe kooxda Manchester United ee reer Spain Ander Herrera.
Heshiiska laacibka reer Spain ee Ander Herrera ayaa wuxuu dhacayaa dhamaadka xili ciyaareedkan, waxaana suuragal ah in Barcelona ay isku dayi doonto saxiixiisa bisha January ee soo aadan, waxayna dooneysaa in ay beeca xurta ah ku soo qaadato.
Kooxda reer Catalonia ee Barcelona ayaa dooneysa inay soo xerogeliso 29 jirkaan reer Spain ka dib markii ay isku dayday sidoo kale inay lasoo saxiixato xagaagii lasoo dhaafay.
Wararka ayaa waxay intaas kusii darayaan in Ander Herrera uu doonayo inuu sii joogo Manchester United, lakiin waxa uu ka careysan yahay dhaqdhaqaaq la’aanta maamulka Red Devils si ay kaga saxiixdaan heshiis cusub uu kusii joogayo Old Trafford.
Guardiola oo difaacay ciyaartoydiisa kadib guuldaradii ay kala kulmeen kooxda Lyon tartanka Champions League
Wesley Sneijder oo Shil Halis ah ku galay Dhul lama Degaan ah